Soterre ho an'ny Qlik Sense
Soterre ho an'i Tableau
MotioCAP - Fanamarinana Cognos
Ho an'ny IBM Cognos Analytics
Fanaraha-maso sy fanaparitahana kinova
Fitsapana ny enta-mavesatra & fihenjanana
Fanaraha-maso sy fanairana
Ho an'i Qlik
Ho an'i Tableau
Bilaogy BI & Analytics
Manome Tombontsoa Analytical Maharitra ny Ekipanao
Motio mandeha ho azy ny asa BI fitantanan-draharaha mampihetsi-po ary mandrindra ny fizotran'ny fampandrosoana BI manahirana mba hamelana ny manam-pahaizana momba ny Analytic hifantoka amin'izay mahaizy azy ireo: fanomezana saina marani-tsaina ho an'ireo mpitantana orinasa hanomezana azy ireo ny sary feno momba ny orinasany.
TSARA MOTIOCI mpanjifa
Famoahana vaovao MotioCI (dikan-teny 3.2.10 FL9) azo alaina.
Fanitsiana ny kitrokely:
Miresaka momba ny vulnerability Log4j2 CVE-2021-45105 amin'ny alàlan'ny fanavaozana ny Log4j2 v2.17.
Ity no fanamboarana ary tsy ilaina ny fanalefahana rehefa nanavao ny dikan-teny vao navoaka ny mpanjifa MotioCI. Raha efa nanaraka ny dingana ho antsika ny mpanjifa KB lahatsoratra eto, tsy mila manavao izy ireo mba hanalefahana ny olana. Raha mitaky fanavaozana amin'ny v.2.17 ny fepetra fiarovana ao amin'ny fikambananao dia tsy maintsy atao ny fanavaozana.
Download MotioCI 3.2.10 FL9 (Motio kaonty tranonkala ilaina).
FANAMARIHANA: Tsy misy fiantraikany amin'ny hafa izany Motio rindrambaiko - MotioPI, MotioCAP, PersonaIQ, Reportcard or Soterre
Motio eto ny fanohanana hanampy anao tsy misy sarany amin'ny fanavaozanao ny 3.2.10 FL9 Laharana fandraisana na rohy Motio Support.
Hetsika sy Webinars
Fantatrao ve fa maimaim-poana ny fanohanana Premium an'i Gitoqlok?
Raha toa ianao ka efa mampiasa Gitoqlok, ilay plugin maimaim-poana ho an'ny Qlik Sense izay manova mivantana ny zavatra hita maso sy ny enta-mavesatry ny angon-drakitra ao amin'ny navigateur, dia aza hadino ny misoratra anarana ho fanohanana premium! Maimaim-poana tanteraka izany!
Fametrahana ny elanelana eo anelanelan'ny Git sy ny Qlik Sense
Mila zotram-piasana tsy misy dikany miaraka amin'i Qlik Sense ianao. Ahoana no ahatongavanao any?
Vonona ny hianatra ny fomba hahatonga ny traikefanao Qlik Sense hahomby kokoa amin'ny alàlan'ny automatique nefa mitazona ny fanarahan-dalàna sy ny fenitry ny fandaminana? Ny manampahaizanay dia hanazava ny fomba Qlik am-pahatokiana tsy misy enta-mavesatra ara-pitantanana na overhead fanampiny.
Tianay ny manampy anao hamaha ny tavoahangy BI! Andao hifandray amin'ny iray amin'ireo hetsika sy tranonkala web ho avy ireo.
Jereo ny hetsika sy tranonkala rehetra
Ny vahaolana rindrambaiko ataonay dia manampy anao hahatratra ny fahombiazan'ny BI ao amin'ny Cognos Analytics, Qlik, ary ny Plan Analytics Powered by TM1.
miaraka Motio® Lozisialy eo anilanao, hahazoanao fahombiazana amin'ny asanao ianao, hanatsara ny kalitao sy ny maha-marina ny fananana fampahalalana, hampitombo ny fahombiazan'ny sehatra, hahatratra ny fotoana haingana kokoa amin'ny tsena, ary hifehezana ny fitantanana ny fizotrany.
Vahaolana entina manamaivana ny fanavaozana ny Cognos, ny fanaparitahana azy, ny fanaraha-maso ny kinova & ny fanovana ny fanovana, ny fanaovana automatique ny asa fitiliana sy ny fitantanan-draharaha, ny fanatsarana ny zava-bita, ny fahafahan'ny CAP & SAML, ary ny fifindra-monina / fanoloana namespace.
Vahaolana amin'ny fanaraha-maso kinova sy fitantanana fanovana any Qlik ary fanatsarana ny fahombiazan'ny fanaparitahana.
Fanadihadiana momba ny drafitra IBM
Vahaolana amin'ny fanaraha-maso kinova sy fitantanana fanovana ao amin'ny Cognos TM1 & Planning Analytics, manamora ny fizotry ny fanaparitahana, manatsara ny asa fitantanana ary mitantana ny fanovana fiarovana.
Aza raisina fotsiny ny teninay. Vakio ny momba ny mpanjifanay sy ny fomba Motio dia nanampy azy ireo hanatsara ny sehatry ny famakafakana sy hanangona fotoana sy vola sarobidy.
Ady amin'ny otrikaretina COVID-19 miaraka amin'ny angona
Disclaimer Aza adino ity andalana ity. Misalasala aho ny hiroboka ao anatin'ireny rano mazàna miady amin'ny politika ireny, saingy nisy eritreritra tonga tao amiko teo am-pandehanana ny alikako, Demic. Nahazo MD aho ary efa tao amin'ny karazana fitsaboana na consultation hatramin'izay. Nandritra ny lasa...
Fantatrao ve ny fomba fampivoarana ny cognos tsara indrindra?
Nandritra ny taona Motio, Inc. dia namolavola "Fomba fanao tsara indrindra" manodidina ny fanavaozana ny Cognos. Noforoninay izany tamin'ny alàlan'ny fanatanterahana fampiharana 500 mahery sy fihainoana izay nolazain'ny mpanjifanay. Raha iray amin'ireo olona maherin'ny 600 nanatrika ny iray amin'ny ...
Motio, Inc. Mahazo an'i Gitoqlok
Motio, Inc. Mahazo an'i Gitoqlok Mitondra fanaraha-maso kinova mahery tsy misy fahasarotana ara-teknika PLANO, Texas - 13 Oktobra 2021 - Motio, Inc., ilay orinasan-rindrambaiko izay manampy anao hitazona ny tombony amin'ny analytics amin'ny alàlan'ny fanaovana ny faharanitan-tsaina sy ny analytics ...
Ka nanapa-kevitra ny hanatsara ny cognos ianao… Ary ahoana?
Raha lava ianao Motio mpanaraka, ho fantatrao fa tsy vahiny amin'ny fanavaozana ny Cognos izahay. (Raha vaovao ianao Motio, tongasoa! Faly izahay manana anao) Nantsoina hoe "Chip & Joanna Gains" an'ny Cognos Upgrades izahay. Okay fa ny fehezanteny farany dia fanitarana, ...
Aza matahotra, misy fanavaozana mora ny kognosy eto
Ny ekipa ao amin'ny CoBank dia miantehitra amin'i Cognos amin'ny tatitra momba ny asa sy ny rafitra fitaterana ara-bola lehibe. Ny fitazonana ny Cognos havaozina dia mamela azy ireo hihazona ny fidirana amin'ireo fitaovana sy rafitra BI hafa. Ny ekipa dia misy mpampiasa orinasa 600 miaraka amina tànana mamolavola ny tatitra ataon'izy ireo ao amin'ny habaka "Ny atiko".
Jereo ny fanadihadiana rehetra
Vakio Motio vokatra “fomba ahoana”, fomba fanao tsara indrindra BI & fanao amin'ny indostria, sns.
BlogBusiness AnalyticsBusiness IntelligenceCognos AnalyticsKarakara ara-pahasalamana Motio QlikUncategorized
Disclaimer Aza adino ity andalana ity. Misalasala aho ny hiroboka ao anatin'ireny ranon-dranomasina mampiady hevitra, matetika ara-politika ireny, saingy nisy eritreritra tonga tao an-tsaiko teo am-pandehanana ny alikako, Demic. Nahazo MD aho ary efa tao amin'ny karazana fitsaboana na consulting hatramin'izay. Nandritra ny...
BlogCognos AnalyticsFanatsarana ny orinasafanavaozanaCognos manatsara
Vonona ny handamina sy hametaka ny sehatra BI & analytics?
Download MotioPI Freeware. Na mangataka MotioPI na MotioCI ampiasaina maimaim-poana amin'ny fanavaozana ny Cognos Analytics anao.
Maimaim-poana: 1 (877) 362-8708
© 2021 Motio. Zo rehetra voatokana ● Fepetra ● politika fiarovana fiainan'olona